Nhau - Bulk Bhegi Jumbo Bhegi Pasuru Ye Iron Ore
Iron ores matombo uye zvicherwa kubva uko simbi yesimbi inogona kubviswa mune zvehupfumi. Iyo ores inowanzo kuve yakapfuma mune iron oxides uye inosiyana muvara kubva kune yakasviba grey, inopenya yero, kana yakadzika yepepuru kune yakatsvuka tsvuku. Iyo simbi inowanzo kuwanikwa muchimiro chemagnetite (Fe3O4, 72.4% Fe), hematite (Fe2O3, 69.9% Fe), goethite (FeO (OH), 62.9% Fe), limonite (FeO (OH)·n (H2O), 55% Fe) kana siderite (FeCO3, 48.2% Fe).
Ores ane akanyanya kuwanda kwehematite kana magnetite (yakakura kupfuura angangoita 60% yesimbi) anozivikanwa se "ore chaiyo" kana "yakananga kutumira ore", zvichireva kuti vanogona kupihwa yakananga mukugadzira simbi. Iron ore ndiyo mbishi inoshandiswa kugadzira simbi yenguruve, chinova chimwe chezvinhu zvikuru mbishi kugadzira simbi—98% yesimbi yakacherwa inoshandiswa kugadzira simbi.
FIBC Bhegi pasuru yesimbi ores.
Denderedzwa - Iyi dhizaini yebhegi inogadzirwa pachirukiso sechubhu uye ndiyo yakaderera mwero weFIBC. Iyo haizochengetedze chimiro chayo kana yakatakurwa uye ichagara pasi uye kubuda kunze pakati. Inenge yakafanana nemadomasi kana yatakurwa, sezvo chigadzirwa chichatambanudza jira kana rikaiswa pakamanikidzwa kwechigadzirwa chiri kutakurwa.
U-Panel - Bhegi reU-pani inhanho inokwira ichibva muhombodo yakatenderera, sezvo ichange iine zvidimbu zviviri zvemucheka wakafanana neU chimiro wakasonerwa pamwechete kuita chimiro chehombodo. Ichachengetedza chimiro chayo chakaenzana zvakanyanya kupfuura setenderedzwa dhizaini.
Four-Panel - Iwo mana-mapaneru bhegi ndiyo yakanakisa bhegi yekugara mativi mamwe kunze kwekusanzwisisika bhegi. Yakagadzirwa nezvidimbu zvina zvejira izvo zvinoumba mativi uye imwe yepasi. Idzi dzese dzakasunganidzwa pamwechete dzinodzivisa kutambanuka kweye bhegi uye ndokuibata mukamu cube zvirinani kwazvo.
Baffle - Iyi dhizaini ndiyo ichave yakanakisa mukuchengetedza cube chimiro chechigadzirwa chako kana bhegi razara. Iine mamwe mabhaffles akasonerwa pasi pakona yega yega kuita sehomwe yekuzadza kona yega yega. Uye zvakare, kune mamwe homwe dzakasonerwa padivi rega kuti chigadzirwa chese chiungane kutenderedza mabhaffles nehomwe. Izvi zvakakwana kana iwe uine diki dhayamita chigadzirwa senge soya iyo inogona kuyerera kuburikidza nemabhaffles isina kusungirirwa. Aya mabhegi akawandisa anozove nyore kurongedza sezvo ivo vachizogadzira yakanaka mraba kiyubu.